Ọgba agba na-agba agba Natural Organic Private Label Mens Beard Grow Serum for Growing Long and Strong Beard
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ntutu ntutu? Onye ọ bụla maara na nwoke dị ogologo, nke siri ike, na nke na-egbu egbu bụ ihe ekworo nye onye ọ bụla na-adị n'ebe ahụ. Naanị ajụjụ bụ, "you nwere ike itolite otu?" Nwa nwoke ọ bụla gbara afụ ọnụ ya maara na ajị agba na afụ ọnụ enweghị ụzọ isi echekwa ntutu gị. Ngwaahịa a na-edozi nsogbu ahụ site n'inyere aka ịlụ ọgụ na-enweghị isi nkwọcha ahụ na agba gị, na-eme ka ntutu gị too ma sie ike na ọbụlagodi. Kedu ihe ngbanye ntutu nwere ike? Agba agba agba agba bụ ahịhịa ...
Uwe nwoke na-edozi isi na-agba agba ahịhịa ahịhịa na-arụ ọrụ nke ọma maka ntutu ntutu na mpaghara nkwọcha.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ntutu ntutu? Hairfufu ntutu site n’akụkụ ahụ́ gị ọ bụla pụrụ ịkpata nrụgide, ma ọ bụ mfu mberede ma ọ bụ mfu oge. Ntutu ntutu (alopecia) nwere ike ịmetụta naanị ntutu gị ma ọ bụ ahụ gị niile, ọ nwere ike ịbụ nwa oge ma ọ bụ na-adịgide adịgide. O nwere ike ịbụ ihe sitere na ihe nketa, mgbanwe mgbanwe hormonal, ọnọdụ ahụike ma ọ bụ akụkụ nkịtị nke ịka nká. Onye ọ bụla nwere ike ịfu ntutu n'isi ya, mana ọ na-abụkarị nwoke. Ihe nketa ntutu los ...